Teboka vavaka hanoherana ny famadihana | HEVITRA VAVAKA
Home vavaka Teboka vavaka hanoherana ny famadihana
Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka hanoherana ny famadihana. Tokony ho fantatrao ny dikan'ny famadihana alohan'ny handehanantsika. Ny famadihana dia faritana ho toy ny fiasa manolotra olona eo am-pelatanan'ny fahavalo amin'ny alàlan'ny fomba famadihana. Ity torolàlana mitondra ny lohateny hoe vavaka manohitra ny famadihana ity dia hizara roa, izany hoe: vavaka manohitra ny famadihana ary vavaka holazaina rehefa hamadika anao. Ny antony dia na iza na iza azo hamadihana, ary na iza na iza afaka hamadika olona koa. Na dia zava-dehibe aza ny hivavahantsika hanoherana ny famadihana, dia zava-dehibe koa ny hivavahantsika mba hanomezan'Andriamanitra antsika fahasoavana tsy hamadika olona hafa izay nanankina ny fiainany tamintsika.
Betsaka ny olona tsy mihevitra an'i Jodasy Iskariota ho Apôstôly satria namadika an'i Jesosy Kristy. Na dia mety tsy fikasan'i Jodasy Iskariota aza ny hamadika an'i Jesosy hatramin'ny voalohany, fa teo am-piandohana dia afaka naka fanahy azy tamin'ny vola ny devoly mba hahatonga azy hamadika an'i Jesosy Kristy. Izany no antony tsy maintsy hivavahantsika manohitra ny fanahin'ny famadihana izay mety maniry hiditra amin'ny olon-kafa tiantsika na amintsika. Ary koa, izahay dia manome vavaka ho an'ireo izay namadika.
Tsy misy olona te hamadika azy, indrindra ireo olona tena tiany sy atokisany. Fa inona ny famadihana? Raha tsy avy amin'ireo olona tiantsika sy tiantsika io. Andriamanitra irery no nahatakatra ny eritreritra izay tao an-tsain'i Josefa rehefa namadika azy ny rahalahiny. Ny fanaintainana sy ny fijaliana miaraka amin'ny famadihana dia ampy handravana tanteraka ny olona. Mivavaka amin'ny herin'ny lanitra aho; tsy hamadika anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra dia tsy hamadika ny fahatokisan'ny olona anao amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Azo atao koa ny mamadika an 'Andriamanitra ny olona. Mamadika an 'Andriamanitra isika amin'ny tsy fanaovana ampamoaka antsika amin'ny toerana izay tokony hampamoahina antsika Andriamanitra. Mivavaka amin'ny famindram-pon'ny Avo Indrindra aho, mba tsy hahitana anao tsy mitady toerana tokony hijoroanao ho an'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mandalina ity torolàlana momba ny vavaka ity ianao dia hahita fiovana miharihary amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
Teboka vavaka hanoherana ny famadihana:
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hofenoinao. Ho feno ny Fanahinao Masina sy ny Herinao, omeo ahy ny fahasoavana hiaritra fijaliana miaraka aminao. Ray ô, tsy tiako ny hamadika anao toa an'i Jodasy Iskariota tamin'i Kristy Jesosy. Tsy te handà anao aho tahaka ny nataon'ny Apôstôly Peter raha niatrika fijaliana ianao. Tompoko, omeo ahy ny fahasoavana hiara-hijoro aminao hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, toheriko ny fahatsapana famadihana rehetra ato an-tsaiko. Mivavaka aho mba hamono ny fahatsapana ao am-poko amin'ny anaran'i Jesosy ny afon'ny Fanahy Masina. Tompo ô, famitahana amin'ny taniko, ny ran'ny zanak'ondry no hamelezana azy. Mampitandrina anay ny teninao fa tokony hivavaka hatrany izahay mba hahasoa an'i Jerosalema mba hambinina izay tia azy. Tompoko, te-hitady fiadanan'ny fireneko foana aho. Mivavaka aho mba homenao ahy ny fahasoavana ho mahatoky.
Ray Lord, momba ny fifandraisako dia toheriko ny karazana famadihana rehetra ato am-poko. Tahaka anao notendren'ny Tompo ity fifandraisana ity dia mivavaka aho mba hanampianao ahy tsy hivadika aminy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, noho ny fanambadiako dia tonga tamin'ny fanoherana ny famadihana amin'ny anaran'i Jesosy aho. Fantatro fa ny fanambadiana dia andrim-panjakana naorin'Andriamanitra. Izany no antony nilazan'ny Soratra Masina hoe: Noho izany antony izany, ny lehilahy dia handao ny tranon-drainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa. Tompoko, na inona na inona mety maniry hiditra amin'ny fiainako hahatonga ahy hamadika ny voadim-panambadiako, dia manimba ny fanahy toy izany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ray ô, mivavaka aho mba hidinan'ny afon'ny Fanahy Masina amin'ny bibilava famadihana rehetra izay nalefa teo amin'ny fiainako mba hianjera, avelao ny afon'ny lanitra handringana ireo menarana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Teboka vavaka ho an'ny saina voafitaka:
Ray Tompo ô, tonga eo alohanao anio aho satria namadika olona tiako sy atokisako mafy aho. Ny foko dia mandeha ra noho ny fanaintainana mahatsiravina. Tompoko, mivavaka aho mba hositraninao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ry Jesosy Tompoko, raha hiroso amin'ny fiainana aho dia mivavaka aho mba hanampianao ahy hanadino ny fanaintainana sy ny alahelo tamin'ny lasa ary hanampy ahy hitadidy ireo lesona avy amin'izany. Mivavaka aho mba hitarihanao ny foko fa tsy hanafay olona hafa tonga amin'ny fiainako noho ny famadihana izay niaretako.
Tompoko, mivavaka aho mba hanampy anao hatoky olona hatrany ianao, omeo ahy herim-po hitia olona fatratra amin'ny fiainako. Vonona ny hisolo ny olana ao an-tsaiko ho an'ny fandriam-pahalemana aho. Mivavaka aho mba homenao ahy ny fiadananao. Hoy ny soratra masina: ny fiadanako no nomeko anao, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao anao. Raiko, avelao ny saiko hahita fiadanam-po amin'ny fitiavanao ahy tokoa, avelao aho hahita ny reharehako sy ny lazako fa manana drafitra tsara kokoa ho ahy ianao satria nampahafantarin'ny soratra masina ahy fa fantatrao ny eritreritrao momba ahy, ireo no eritreritra ny tsara fa tsy an'ny ratsy mba hanomezana ahy fiafarana antenaina. Tompo ô, ampodiko aminao ny fahoriako sy ny fanaintainako; ampio aho hikarakara izany.
Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny nanomezanao ahy ny fahasoavana hijerena mihoatra ny soritra nateraky ny saiko tamin'ny famadihana olona tiako be. Misaotra anao amin'ny herim-po nomenao ahy handroso amin'ny fiainana, asandrato amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
vavaka manohitra famadihana
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanamainana fandriana
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny famosaviana
FIVAVAKANA HO AN'NY ZANAKA ZIMBABWE